ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတခုကြောင့် ကျနော် ယနေ့မှစ၍ ဤ Blog တွင် မည်သည့် post မျှ ရေးဖြစ် တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ဤ Blog ကိုပါ ဖျက်လိုသော်လည်း တချို့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်ကောင်း ဝင်နေနိုင်သေး သည်ဟု ယူဆသဖြင့် ဤအတိုင်း ထားလိုက်ပါမည်။ ကံကောင်း ကြပါစေ..။
Posted by pyaykaungaung at 2:39 AM 1 comment:
Posted by pyaykaungaung at 10:16 AM4comments:
ဘူး သီး တောင် န ယ် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ တွေ အ ကြောင်း အ ပို င်း ( ၁ )
ဘူး သီး တောင် န ယ် သား တ ယောက် က ပြော ပြ မည့် ဘ င်္ဂါလီ တွေ အ ကြောင်း
အ ပို င်း ( ၁ )
( ဤ ဆောင်းပါးကို ကျနော့်ထက် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင် လိမ်မာသော ဖဘမိတ်ဆွေတဦးဦးအား ဘာသာ ပြန်ဆိုစေလိုသော ဆန္ဒရှိပါသည်။ ထိုသို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုလိုခြင်းမှာ မြန်မာပြည် အနောက်ဖက်စွန်းနေ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့၏ အခြေအနေအမှန်ကို တကယ် နဝေတိမ်တောင် ဖြစ်နေ ကြသော၊ သို့မဟုတ် ဖြစ်ယောင်ဆောင် နေကြသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားများ ( world citizens ) ၏နားသို့၊ ဘယ်နှစ်နားသို့ ပေါက်ပေါက်၊ ပေါက်စေချင် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေက ခွင့်ပြုလျှင် ဤဆောင်းပါးကို တိုသွားအောင် တည်းဖြတ်ပြီး၊ ……………………… သို့ပေးပို့လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးထဲတွင် “ဒီကုလားတွေ ( လူဦးရေတသန်းလောက်ရှိ ) ကို မြန်မာပြည်က အကုန်မောင်း ထုတ်ပစ်” ဟူသော လက်တွေ့ အလုပ်မဖြစ်သည့်၊ ဈေးပေါလှသည့် ကြုံးဝါးသံမျိုး ကြားရလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့ ဘင်္ဂါလီမဟုတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်သော၊ ပြဿနာကို တကယ်ဖြေရှင်းဖို့ အာရုံစိုက်သော နည်းနာများ ကို မကြံဆ၊ မဆွေးနွေးကြဘဲ အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်ဖြစ်သော “ကုလား” ကို ထိုင်ဆဲသည့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘူးသီးတောင်မြိုနယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူ၊ ကျနော့်၏ဆွေမျိုး သားချင်း မိသားစုဝင်များအားလုံး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာပင် လက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိကြသူ တဦး အနေဖြင့် မနေနိုင်လွန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးပါသည်။ ဤသို့ရေးရာတွင် liberal journalism ၌ အရေးအကြီးဆုံးကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဟုယူဆကြသည့် “သမာသမတ်” ရှိစေခြင်း ( Being unbiased ( Fairness ): the most important ethic/ dignity of journalism ) အလို့ငှာ “ကုလား” တွေကို မဆဲထားသည့်အပြင် သူတို့အပေါ် တော်တော် ကောင်းထားသဖြင့် ကျနော်ကပဲ အဆဲခံရမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀% လိပ်ပြာသန့်စွာ ကြိုတင်ပြောထားလိုမှာ ကျနော့်ကိုယ်ထဲ၌ ဘင်္ဂါလီ သွေးတစက်မျှ မပါဝင်ပါ ( ၀% )။ ကျနော် ဘင်္ဂါလီတွေနှင့် အကျိုးစီးပွား ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှု တပြားသားမျှမရှိပါ ( ၀% )။ ကျနော့်ကို “အသုံးမကျတဲ့ကောင်” ဟုဆဲရေးလိုကြလျှင် အဆဲ ခံရနိုင်မှန်းသိသိနှင့် ( လက်ရှိအချိန်မှာ အများတကာက သဘောကျကြမည် မဟုတ်ဟုသိသိနှင့်) သို့ရာတွင် ယခုအချိန်မှာပြောမှ အကျိုးရှိမည်ထင်သော၊ လူအုပ်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်ယောင်တာ မဟုတ်ဘဲ မိမိအမှန်တကယ် ယုံကြည်သောစကားကို သင် လူသိရှင်ကြား ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ပြော ခဲ့ပြီးပြီလဲဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင် မေးကြည့်စေချင်ပါကြောင်း။ )
ဦးစွာပထမ ကြေငြာထားသင့်သည်မှာ ကျနော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်အစွန်ဆုံး၊ ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ဖျားဒေသ၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ အများအပြားနေထိုင်ရာ ( ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို၏ တရားဝင်ပြောကြားချက်အရ ၉၄% ) ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်း မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်သော်လည်း ဘင်္ဂါလီ ဘာသာ စကားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထက် ပိုမိုသွက်လက်စွာ ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျနော့်ကို ကကြီး၊ခခွေး မြန်မာသင်ပုန်းကြီး၊ A,B,C,D English Alphabet သင်ပေးခဲ့ကြသူတို့နှင့် (၈)တန်း အောင်သည်အထိ ကျနော့်၏ဆရာများအားလုံးမှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ကျောင်းဆရာများချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ( ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီးတွေက အပျိုဖော်ဝင်ပြီးချိန် မှစ၍ သွေးဆုံးချိန်အထိ အိမ်ပြင် မထွက်ရသဖြင့် ဘင်္ဂါလီဆရာမတော့ မရှိခဲ့ဖူးပါ။ ) မူလတန်းမှလွဲ၍ အထက်တန်းအထိ ကျနော့်၏ ကျောင်းနေဖက် အများစုသည်လည်း ဘင်္ဂါလီများသာဖြစ်ကြပါသည်။
ကျနော် မွေးဖွား၊ ကြီးပြင်းခဲ့ သောကျေးရွာသည် ဘင်္ဂါလီတွေနေထိုင်ရာ ကျေးရွာများနှင့် ၁-၂ မိုင်ခန့် အကွာအဝေးမျိုး သာရှိပြီး နေ့စဉ် ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် အစရှိသော ကူးလူးဆက်ဆံမှုရှိသဖြင့် ကျနော် ဤလူမျိုးတွေအကြောင်းကို သူတို့လောက်နီးပါး သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ဘာ့မီဒီယာနှင့် မူဆလင်ကမ္ဘာတို့က ဂဂနန မသိသေးသော ( သို့တည်းမဟုတ် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြသော )၊ ကျကျနန လှည့်ဖြားခံနေရသောအချက် အချို့ကို ပြောပြချင်ပါသည်။
( ၁ ) ဤလူမျိုး၏အမည်ကို ကျနော် “ဘင်္ဂါလီ” ( လူမျိုး ) ဟု တောက်လျှောက် ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ် နေခြင်းမှာ ပြည်ပမှ “ရိုဟင်ဂျာ”အရေးလှုပ်ရှားနေကြသည့် ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံရေးသမားများမှအပ ဤလူမျိုး ၉၉.၉၉% လောက်က သူတို့၏လူမျိုးအမည်ကို “မူ-ဆူလ် -မန်း” ( Muslim ) သို့မဟုတ် “ဘာ-ငါလ်း” ( ( Bengal = Bengali ) ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ဘယ်သူကမှ “ရိုဟင်ဂျာ” ( Rohingya ) ဟု မခေါ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်ကြုံဖူးသလောက် မေယုမြစ်ဝှမ်းတလျှောက် ( မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေမြို့နယ် ) နေ အနောက်ပိုင်းသားဘင်္ဂါလီ ( Westerners ) များက မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်လောက်မှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖက်/ အရှေ့ဖက်ခြမ်း နေ ရခိုင်စကားမွှတ်နေအောင် ပြောတတ်သော အရှေ့ပိုင်းသားဘင်္ဂါလီ ( Easterners ) များကို အနည်းငယ် မနှစ်လိုသံဖြင့် ( အမေရိကန်တွေက Southerners ဟုသုံးနှုန်းကြသလို ) “ရိုဟင်ဂျာ” ( ရွင်းဂျား ) ဟူ၍ ခေါ်တတ်လေ့ ရှိကြပါသည်။
လူမျိုးတမျိုးသည် မိမိတို့အခေါ်ခံလိုသည့်အမည်ကို ခိုင်လုံသောသမိုင်းအထောက်အထား၊ အများ စု၏ဆန္ဒ ( ဥပမာ၊ petion ပြုလုပ်ခြင်း ) များဖြင့် နိုင်ငံတော်သို့ တရားဝင် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ( ရခိုင်လူမျိုး ၁၀၀%နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၀% လောက်က သဘောကျကြမည် မဟုတ်သော် လည်း ) ကျနော့်ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်း ရိုးသားစွာဘက်မလိုက်ဘဲရေးရလျှင် ဘင်္ဂါလီများသည် “မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြသူများ” အား နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြုရန်ကိုပင် ကောင်းမွန်၊ ချိုသာ၊ တရားဝင် အမူအရာဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါသေးသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ လူဖြူအမေရိကန် ( Caucasian Americans) တို့က တိုင်းရင်းသား အမေရိကန် ( Native Americans ) ဟုအခေါ်ခံချင်၍ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ လောက်ကပင် အတ္တလန်တစ် သမုဒ္ဒရာကိုသစ်ဖောင်များဖြင့်ဖြတ်ကာ အမေရိကတိုက်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြသည်ဟူ၍ သမိုင်းကိုလိမ်ညာ ဖို့မကြိုးစားကြသကဲ့သို့ပင် So-called Rohingyas တွေကလည်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရဖို့အရေး အထောက်အထားမခိုင်မလုံနှင့် ကြိုးစားမနေသင့်ဟု ထင်ပါသည်။ အမေ ရိကန်သမ္မတ ( ၄၄ ) ယောက်စလုံး အမေရိကတိုက်၏ တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်ကြပါ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ထိုက်၊ မဖြစ် ထိုက် နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်..။
ကျနော်သည် သမိုင်းပညာရှင်သော်၎င်း၊ မည်သည့်ပညာရှင်မှသော်၎င်း မဟုတ်သဖြင့် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး ( Rohingya ဆိုသူ ) တို့၏မူလဇစ်မြစ် ( origin ) ကိုသမိုင်းဆရာတဦးလို မလွဲနိုင်သော သမိုင်းအထောက်အထားများဖြင့် အခိုင်အခံ့ ရှင်းပြနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအလုပ်ကို ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ သမိုင်းပညာရှင်များ ( အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ အပါအဝင် ) သာဆောင်ရွက်သင့်ကြပါသည်။ ကျနော် တို့ ငြင်းခုန်နေ၍ မပြီးပါ။ သို့ရာတွင် “ဟုတ်ကို ဟုတ်ရမည့်” သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား ( historical evidences ) များမဟုတ်သော်လည်း Wikipedia တွင် ဖော်ပြထားချက်များကို ကျနော့်၏ conclusion နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော တွေးဆချက် ( assumption ) ကိုကား တွေးကြည့် နိုင်ရုံမျှ ပြောပြလိုပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသောစကားရပ်၏ မူလဇစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အယူအဆ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြ သည်။ ( The origin of the term "Rohingya" is disputed. ) လောလောဆယ် ခေတ်စားနေသော အဆိုတရပ်မှာ အဒီ ( ဂ ) ရာစုလောက်တွင် အာရပ်ကုန်သည်များ ရမ်းဗြဲကျွန်း ( Ramree Island ) အနီး၌ သင်္ဘောပျက်၍ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်က “သတ်စေ” မိန့်တော်မူရာ အာရပ်တို့က အရဗီဘာသာတွင် “သနားတော်မူပါ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် “Rahma” ဆိုသောစကားလုံးဖြင့် ငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ ကြသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူတို့ကို “Raham” ဟုခေါ်ရာမှ၊ ကာလရွေ့လျှားလာသောအခါ “Rhohang”၊ ထိုမှ သည် “Rohingya” သို့ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နောက်ထပ် ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်လှသော ဆရာတယောက်ကတော့ ရခိုင်ပြည်၏ “မြို့ဟောင်း” ( Mrohaung ) မှသည် (မ)သံ ပျောက်၍ “(M)Rohang”၊ ထိုမှသည် “Rohingya” ဖြစ်လာသည် ဆိုပါ၏။ ဤသည်တို့မှာ ခိုင်မာသော သမိုင်းအထောက်အထားမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလွန်ခနော်နီခနော်နဲ့နိုင်လှသော ပါးစပ်ရာဇဝင် ဆန်ဆန် “ရော်ရမ်းမှန်းဆချက်” များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား အနေဖြင့်ကား “Rooinga” ဟူသောအမည်ကို အောက်ပါဆောင်းပါးမှာ ပထမဆုံးတွေ့ရသည်ဟု ဆိုပါ သည်။
“King Narameikhla (1430–1434) of Kingdom of Mrauk U ( မြောက်ဦးဘုရင် နရမိတ်လှ၊ အေဒီ ၁၄၃၀-၁၄၃၄ ) , after 24 years of exile in Bengal, regained control of the Arakanese throne in 1430 with military assistance from the Sultanate of Bengal, the Bengalis who came with him formed their own settlements in the region.”
“Narameikhla ceded some territory to the Sultan of Bengal and recognized his sovereignty over the areas. In recognition of his kingdom's vassal status, the kings of Arakan received Islamic titles and used the use of Bengali Islamic coinage within the kingdom. Narameikhla minted his own coins with Burmese characters on one side and Persian characters on the other.”
သမိုင်းကျမ်းစာအုပ်များကို ဖတ်ဖို့လက်လှမ်းမမီသဖြင့် Wikipedia ဖတ်ပြီး ကျနော့်၏သုံးသပ်ချက် ကိုပြောပြရလျှင် အာရပ်ကုန်သည်တွေ သင်္ဘောပျက်၍ ရခိုင်ရှင်ဘုရင်က အသက် ချမ်းသာခွင့်နှင့် နေရာထိုင်ခင်းပေးခဲ့သည် ဆိုသည်မှာ မှန်နိုင်ပါသည်။ ( ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တ ညီနောင်တွေများလား )။ ဒါပေမဲ့ သင်္ဘောတစီးပျက်ရုံဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုး တိုးပွားလာဖို့အကြောင်း ( ဆင်ခြေ ) သည် သိပ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိချေ။ ယခင် သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်များခေတ်ကတမင်းကို တမင်း စစ်ကူပေးသည့် ကိစ္စတွေ ရှိခဲ့တာလည်း မှန်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အေဒီ ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ရခိုင်လူမျိုး ၃၅၀၀၀ ခန့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်သို့ ထွက်ပြေးရသည် ဆိုရာ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်တဝိုက်တွင် အခြေကျနေကြသူ ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) များလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြဖွယ် ရှိသည်။ ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက် မဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီး ရခိုင်သို့စစ်ချီစဉ် ကလည်း ရခိုင်လူမျိုးများ အဖိတ်အစဉ် အတော်များခဲ့သည်ဟု သိရသဖြင့် ၁၅ ရာစုလောက် ကတည်းက ရောက်နေခဲ့သည်ဟုချည်း တွင်တွင်ပြောနေကြသော “ရိုဟင်ဂျာ” သမိုင်းဆရာများ အေဒီ ၁၈၂၃ အရောက်မှာ ရခိုင်ပြည်တွင် ဘင်္ဂါလီ ( ရိုဟင်ဂျာ ) ဦးရေ ဘယ်လောက် ကျန်နေသေးသလဲဟု စစ်ဆေးကြည့်သင့်ကြလေသည်။ ကျနော်ကတော့ သမိုင်းဆရာ မဟုတ်သဖြင့် မသိပါ။
ယခု ဤလူမျိုးတွေ ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာ သဲလွန်စ ရလိုရငြား ကျနော်တို့၏ အနောက်ဖက် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်သို့ တချက်ငဲ့စောင်းကြည့်ကြရအောင်။ Bangladesh ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ( Land/ Country of Bengal ) ဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားနှင့် သူတို့၏ လူမျိုးနွယ်ကို “Bengal/ Bengali” ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ကျနော်တို့ဆီက ဘင်္ဂါလီ ( so-called Rohingya) တွေပြောဆိုကြသည့် ဘာသာစကားသည်လည်း ထူးထူးခြားခြား တိုက်ဆိုင်စွာပင် Southern Chittagonians တွေပြောဆိုကြသည့် Bengali စကားနှင့် ချွတ်စွတ်နီးပါး တူညီနေပါသည်။ အညာသားနှင့် ရန်ကုန်သား လေယူလေသိမ်း ( dialect )၊ တချို့အသုံးအနှုန်း ကွာသလောက်သာ ကွာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ( အထူးသဖြင့် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်၊ စစ်တွေမြို့များမှ ) ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဘင်္ဂါလီ များနှင့်မျိုးနွယ်တူ၊ ဗြိတိသျှကိုလိုနီပြုမှု နောက်ပိုင်း ( ၁၈၂၃ နောက်ပိုင်း ) တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်မှ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ဟူသောအဆိုကို ကျနော် ပိုထောက်ခံပါသည်။
ရခိုင်လူမျိုးများသည် တပြည်နယ်လုံးတွင်သာ လူများစုဖြစ်ပါသည်။ ဘင်္ဂါလီတွေက သူတို့ မူဆလင်တွေကိုသတ်ဖြတ်ပြီး စုပုံထားသည်ဆိုသည့် လုပ်ကြံ၊ လီဆယ်ထားသောဓါတ်ပုံများကို၎င်း၊ အသတ်ခံရသည်ဆိုသော မဟုတ်မမှန်၊ ယုတ္တိမတန်သည့် ကိန်းဂဏန်းကို၎င်း ဖြန့်နေကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာကလည်း သူတို့ကို သံယောင်လိုက်ကာ “Rohingya minorty” တွေကိုလူသားချင်းစာနာ ကြပါ ဟုချည်း တွန်းပြောနေကြ ပါသည်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့နယ်ထဲက လူဦးရေ၏ ၆% မျှသာရှိ သော ရခိုင်လူနည်းစု ( minority ) တို့၏ အရေးအကြီးဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ဖြစ်သည့် “အသက်ခန္ဓာ လုံခြုံမှု” ကိုကား ယောင်၍မျှပါးစပ်မဟကြပေ။
ဒုတိယအကြိမ် ဘက်မလိုက်ဘဲရေးရလျှင် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှာ ရခိုင်လူဦးရေက အများစု ( majority ) ဖြစ်ပြီး ရခိုင်လူမျိုး ( ဖြစ်ဟန်ရှိသူ ) တွေက တောင်ကုတ်ကားလမ်းပေါ်မှာ လူအုပ်ဖြင့် ပိတ်ဆို့ကာ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးဆယ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကတော့ အလွန်အရုပ်ဆိုးသော majority က minority ကို အနိုင်ကျင့်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအပြုအမူကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း စိတ်မသက် မသာ ဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိပြီး “ဒါ တရားဥပဒေမစိုးမိုးတာပဲ” ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက ဤ ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် သူမ တစုံတရာ ဖြန်ဖြေ ပြောဆို သည်ကို ကြားလိုကြ သော်လည်း သူမက အားလုံး၏စိတ်ကွက်မှုကိုခံယူ၍ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါသည်။ ကျနော့်အနေဖြင့် လည်း ကျနော်တို့၏ “ဒီမိုကရေစီ အနာဂါတ်ခရီး” အတွက် သူမကို တိုင်းပြည်က၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတိုင်းက အထူးချစ်ခင်နေဖို့ လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် အများနည်းတူ သူမကို တစုံတရာ ဝင်ပြောစေလိုခဲ့သော်လည်း ဘာမှမပြောခဲ့သည့်အတွက် သူမ၏ “ပွဲလန့်တုန်း ဖျာမခင်းတတ်မှု၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်မထုတ်တတ်မှု” ကိုတော့ အံဘွယ်ဘနန်း မြင်လိုက် ရပါသည်။
ဤပွဲမှာ အကြီးအကျယ် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထွက်သွားသူကတော့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် သူ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ( ဝန်ကြီးအချို့ ) ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်သည် သမ္မတကြီးကို ထောက်ခံ အကောင်းမြင်သူ တဦးသာဖြစ်ပြီး၊ တချို့လူတွေလို သူဘာလုပ်လုပ်အပြစ်ပြောဖို့ စောင့်နေသူမဟုတ်ပါ။သို့နှင့်ပင် လည်း ယခုလူတွေက အထူးသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေက အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ထောက်ခံနေကြသော UNHCR ကော်မရှင်နာမင်းကြီးကို သမ္မတကြီးပြောလိုက်သည့်စကားကို သူ တကယ် ထိုသို့လက်တွေ့ လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်၍ပြောခဲ့သည်ဟု ကျနော်မယုံကြည်မိပါ။ သမ္မတ တယောက်အနေနှင့် UNHCR က ထိုသို့လုပ်ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်သည်ကို သူ မသိမဟုတ်၊ သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့် မည်။ ထိုသို့ သိလျှက်နှင့်ပင် ( ညှာညှာတာတာ တွေးပေးရလျှင် ) ရခိုင်တွေက “ဗမာလက်အောက်မှာ မနေဘူး၊ အခု Federal Union လောက်နဲ့ မကျေနပ်နိုင်တော့ဘူး။ Independence ပဲ လိုချင်တယ်” ဟု အသံထွက် လာကြ၍ ဇာတိပုည ဂုဏ်မာန ထက်သန်လွန်းသည့် ရခိုင်လူမျိုးတွေကို နှစ်သိမ့်သည့် အနေဖြင့် သော်၎င်း၊ ( မညှာမတာ တွေးပေးရလျှင် ) ဒေါ်စုက “မူ”သမား ( person of principle ) တယောက် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အကြောင်းတခုခုရှိ၍ ( ဥပမာ၊ တောင်ကုတ် ၁၀ လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို ကိုယ့်ဖက်က လွန်သည်ထင်၍ ) ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီပဋိပက္ခတွင် ဘာမှဝင်မပြောသာဘဲ ရှိနေရာ၊ ရခိုင်လူမျိုးများ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၉၀% လောက်က အားမလို အားမရ၊ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြခိုက် သူ့သမ္မတသက်တမ်း အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ထောက်ခံမှုကို ရယူလို၍၎င်း ပြောခဲ့သည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဖတ်ရတာ ကြိုက်သေးလျှင် အပိုင်း ( ၂ ) ကို စောင့်ဖတ်ပါ။ ကျနော် ခဏ နားပါဦးမည်။
အ ပို င်း ( ၂ )
၃။ ပတ်သက်သူများ အားလုံးသို့ အကြံပြုခြင်း ( Suggestions to All Concerning Parties )
Posted by pyaykaungaung at 6:48 AM2comments:
( ဟိုရောက် သည်ရောက် အလ္လာပစကား။ ။ ကျနော် ဤ “ကောင်းတာတွေကို ယူသော် မကောင်းလော့” စီးရီစ်းကို အနည်းဆုံး အမှတ်စဉ် ( ၁၀ ) လောက်အထိ ရေးမည်ဟု မူလက စိတ်ကူးထားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရေး ချင်သည်မှာ ကျနော်က “မြန်မာပြည်မှာ ဟောဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဗျို့။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘာကောင်းသလဲဗျာ” လို့ ပြောတာလောက်ထက် “အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကို ဟောဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလား ညီကို မောင်နှမတို့” ဟုအကြံပြုတာက ပို၍အသုံးကျမည်ဟု ထင်မိသောကြောင့် တကြောင်း ပါပါသည်။ ထို့ပြင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံ ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ တာစူ၊ နိုင်ငံတကာကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေချိန်မှာ ကိုယ်က ဘာမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် သွားမကူညီနိုင်လျှင်တောင် မိမိ ပြည်ပတိုင်းပြည်တွေကိုရောက်နေလို့ သိလာတဲ့ သူတို့ ဆီက “အလွယ်နည်း” “အကောင်းနည်း” တွေကို အချင်းချင်းဖလှယ်၊ တယောက်တလက် အကောင်းတွန်း တွန်းကြစေချင်သဖြင့် ကိုယ်တိုင် စလုပ်ကြည့်သည့် သဘောဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဥာဏ်ရည် မနိမ့်ကြသော အပြည်ပြည် အရပ်ရပ်က ကျနော်တို့ ညီကိုမောင်နှမ တွေကို “Pessimism လောက်မှာချည်းပဲ ရပ်မနေကြပါနှင့်။ Let’s build up sustainable better foundations required for an ethical/ moral/ intelligent open society in our motherland in the view of constructive optimism” ဟု တိုက်တွန်းလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ( မြန်မာလို ရေးလိုက်လျှင် ဆရာလုပ်ချင်သည့်လေသံ ထင်းနေနိုင်သောကြောင့် tone လျှော့ထားတာသာ ဖြစ်ပါသည်း))
ကျနော် ဟိုတနေ့က ဖဘပေါ်မှာတစုံတယောက်က “NLD ပါတီက ၄၃ နေရာနိုင်လည်း အလကားပဲ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မယ်လို့ ပြောနေတာလည်း ပါးစပ်ပါလို့ ပြောနေတာပဲ။ ၂၀၁၅ မှာ ၇၅% နိုင်ရင်တောင်မှ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်နိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ပညာရှင်ဂိုက်မျိုးနှင့် ဆန်းစစ်ပြထားသော post တခုကို ဖတ်မိပါသည်။ ကျနော့်အမြင်မှာ “ဒါဟာအလကားပဲ” ဟုသူထင်နေလျှင် ဒါထက်ပိုကောင်းသော လက်တွေ့ကျ သည့်အစီအမံ/ အကြံပြုချက်တခုကို NLD ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ) နှင့် ကျနော်တို့အား သူပြောပြနိုင်ရ ပါမည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥဏ်ရည်ကြီးသည့်၊ နှလုံးမြတ်သည့် မိခင်တဦးပမာ အားကိုးတကြီးနှင့် တစုံတရာ အကြံပြုကြသည်ကို ကျနော်လည်း ကြားချင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အခုထိတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ရန်သူပမာအငြှိုးတကြီးနှင့် ရန်ပြုကြသည့် post တွေနှင့် ( တချို့လူတွေက ပိုလွန်းရန်ကောဟု အမြင်ကတ်လောက်အောင် ) ချီးကျူးကြည်ညိုကြသည့် post တွေကိုသာ တွေ့နေရပါသေးသည်။ အပြုသဘောဖြင့် နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်၊ အကြောင်းသင့်၊ အကျိုးသင့် တစုံတရာ အကြံပြုသော post မျိုး သိပ်မတွေ့မိဖူးသေးပါ။ ဆက်ရသော် ထိုပိုစ့်ထဲမှာ “ထို့ကြောင့် NLD ဘာလုပ်သင့်တာလဲ” ဟု ထိုသူ က အဆိုပြုချက်တခုခုကို တိတိကျကျ ဘာမှအကြံမပြုထားပါ။ ထို့ကြောင့်ထိုသူကို တတ်ယောင်ကားလုပ်ချင်တဲ့ ၄ ပေလောက် သာ မြင့်သော လူစဉ်မမီသည့် ဂျပု တယောက်အဖြစ်သာ ကျနော် မြင်မိလေသည်။ ကိစ္စရပ် တခုကို ယခုထက် ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်သေးသည်ဟု မညွှန်ပြနိုင်ပါဘဲနှင့် သူတပါးကို ဆရာ မလုပ်သင့်ဟု ထင်ပါသည်။ သူပြောသလိုသာဆိုလျှင် ဘာမှ ဖြစ်လာမည် မဟုတ်သဖြင့် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင် နေကြရုံသာရှိလေသည်။ ကျနော်က “ထို့ကြောင့် ဒါကိုလုပ်သင့်သည်” ဟု recommendation မပေးနိုင်သော ဘယ်ပညာရှင်၏ စာတမ်း ကိုမှ တောင် read-worthy ဖြစ်သည် မထင်လှချေ။ ပညာရှင်ဆိုလျှင် A better strategy toabetter outcome ကို ကျနော်တို့လူပြိန်းတွေကို လမ်းညွှန် ပြနိုင်ရပါမည်။ ထို့အတူ ပညာရှင်မဟုတ်စေကာမူ တစုံတယောက်က သူကောင်းသည်လို့ ထင်မိတာကို ဘာကြောင့် ပိုကောင်းသည်ထင်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြနိုင်လျှင် ရေးသူက လည်း ရေးထိုက်၊ ဖတ်သူကလည်း ဖတ်ကြည့်ထိုက်သည်ဟု ထင်မိပါသည်။ သဘောတူ တာ မတူတာက တကိစ္စပေ။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့တတွေ ဖဘမှာ တစုံတရာ အကြောင်းသင့်၊ အကျိုးသင့် ပြောဖြစ်ကြလျှင် ယင်းသို့ ပြောကြဆိုကြခြင်းသည် အကျိုးမဲ့၊ အချည်းနှီး၊ အလကားထိုင်ပွားနေခြင်း ဟု ကျနော်ကတော့ မထင်မိပါ။ ဥပမာ၊ ကျနော် Tag လေ့ရှိသော၊ ကျနော့်ကို Tag လေ့ရှိသော friends list ထဲမှာ မြန်မာပြည်က ( အငြိမ်းစား စစ်အရာရှိကြီး ဖြစ်ဟန်ရှိသူ ) လက်ရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တဦးလည်း ပါဝင်နေသည်ကို ကျနော် မနေ့ကမှ သိပါသည်။ ဤ ဖဘ ကွန်ရက်ထဲမှာ ထိုသို့ အလွှာစုံမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် နေကြပါသည်။ ကျနော်တို့ ပြောကြ ဆိုကြတာတွေထဲမှာ တိုင်းပြည် အတွက် ထားသည့် စေတနာတွေ တကယ်ပါခဲ့ရိုးမှန်လျှင် ထိုစေတနာကို မြင်သူကမြင်ပြီး၊ ယူသုံးကြည့်သူကလည်း သုံးကြည့်ကြပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ဖြင့် ယခင်က ခက်နေသော ကိစ္စရပ်များ လွယ်ကူသက်သာ လာခဲ့လျှင် ဖြစ်စေ၊ စောင်းနေသော အရာတခု ပြန်လည်တည့်မတ်လာခဲ့လျှင် ဖြစ်စေ ကျနော်တို့တတွေ ( ပွားနေကြတာ ဖြစ်လျှင်ပင် ) ပွားရကျိုးနပ်သည်ဟုသာ ဆိုရပေတော့မည်။ Facebook သည် middle-class Myanmar community အတွက် The most powerful and rapidly-inspirational citizen journalism တရပ်ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီဟု ကျနော် ( ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ) ထင်ပါသည်။ ပညာရှင်တို့၏ attitude research တွေ၊ ဘာတွေ တော့ မတွေ့မိသေးပါ။ နောင်အခါ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က တက္ကသိုလ်တွေ၊ သတင်းစာတိုက်တွေ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက သည် စစ်တမ်းကောက်သည့်အလုပ်ကို လုပ်လာကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။
အမေရိကန်စာရေးဆရာ Henry David Thoreau ၏ လက်ဦးဆရာ၊ American Transcendentalism ၏ ပြောရေးဆိုခွင်ရှိသူ Ralph Waldo Emerson က “လူသည် အမှန်တရားကိုသိဖို့ သင်ယူနေစရာမလို၊ မွေးရာပါဗီဇအားဖြင့် သိခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်ကို သိဖို့ တကူးတကန့် သင်ယူနေစရာ မလိုသကဲ့သို့တည်း” ဟု ရေးဖူပါသည်။ So learned people, Emerson concluded, enjoyed no special advantage in pursuing truth. All persons can glimpse the truth by simply trusting the promptings of their hearts. ဟုလည်းဆိုပါသည်။ ကျနော်လည်း နဂိုကပင် အဲသည်လို ယုံကြည်သူဖြစ်၍ ဤ series ကို ရေးချင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခု ကျနော် မှန်းထားသလောက်၊ ( ၁၀ ) ပုဒ်လောက်ထိ ရေးနိုင်မည် မထင်တော့ပါ။ ယခု စာသင်ရာသီ ( spring semester ) တွင် ကျနော် “State and Local Government” နှင့် “Peace and Conflict” ဆိုသော Political Science နှစ်ဘာသာကို ယူထားမိရာ သည်မြို့၏ current political/ social issue တခုခုအပေါ်အခြေခံလျှက် Field Reports, Case Study နှင့် Class Project စတာတွေကို လုပ်ရမည်ဟု ဆိုပါသည်။ State and Local Government ဘာသာရပ်အတွက် Class Study လုပ်ထားသော ကျောင်းသားဟောင်း တယောက်၏စာတမ်းကို ဆရာက ကျောင်းသားတိုင်းကို လက်ဆင့်ကမ်းကြည့်ရှုစေရာ Senator, Company Executive, Mayor တို့နှင့် Interview လုပ်ထားပြီး A-4 နှင့် ( ၁၈ ) မျက်နှာခန့် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Field Report အတွက်လည်း City Council Meeting စသည့် လူထုနှင့်အစိုးရ ဆက်နွယ်နေသည့် အစည်းအဝေးတွေကို သွားတက်ပြီး မြင်ရသည့် မြင်ကွင်း/အတွေ့အကြုံကို ရေးပြထား ကြတာကို တွေ့ပါသည်။ ကျနော့် အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဖလန်းဖလန်း ထနိုင်လောက်အောင် ကောင်းလှသည် မဟုတ် သဖြင့် နည်းနည်းတော့ စိတ်လေးနေမိပါသည်။ ထိုသို့ demanding and time-consuming ဖြစ်လှသည့် ကျောင်းစာတဖက်နှင့်မို့ ဤ Post ကိုရေးပြီး၊ နောက်ထပ် ၂ လလောက် သည် series ကို ထပ်ရေးနိုင်ဖွယ် မရှိကြောင်း အသိပေးလိုက်ရပါသည်။ )
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ လူမှုဖူလုံရေးစနစ် ( Social Security )
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သမ္မတ Franklin D. Roosevelt ( ပထမသက်တမ်း ) လက်ထက် ၁၉၃၅ ခု ဩဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ President's Committee on Economic Security က မူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့တဲ့ The Social Security Act ကို သမ္မတက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည် ပြုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကမှာ ၁၉၃၀ တဝိုက် စီးပွားပျက်ကပ် ဆိုက်တော့ senior citizens ( ၆၅ နှစ်အထက် သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ ) ရဲ့ ၅၀% လောက်အထိ ဆင်းရဲမွဲတေမှု စံနှုန်းအောက်ကို ရောက်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကူအညီ လိုအပ်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလို အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘဝအာမခံချက်နဲ့ လုံခြုံမှုကို ပေးဖို့ ဒီအက် ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီဥပဒေထဲကို Medicare, Medicaid နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ( Social Security Administration ) ဟာ မေရီလင်းပြည်နယ် ဘောလ်တီမိုးမြို့ ( Woodlawn ) မှာ ဋ္ဌာနချုပ်ရှိပြီး လူမှုဖူလုံရေး ( social welfare ) နဲ့ လူမှုဘဝအာမခံ ( social insurance ) လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီ အက်ဥပဒေကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာတော့ ဒီအက်ဥဒေအရ အငြိမ်းစားများ ( retirees )၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ( senior citizens )၊ မသန်စွမ်းသူများ ( the disabled )၊ အလုပ်လက်မဲ့များ ( the unemployed )၊ မုဆိုးမနှင့် ကလေးသူငယ်များ ( widows and children ) စတဲ့ အကူအညီ လိုအပ်သူများ ကို ထောက်ပံ့ကြည့်ရှုတဲ့ ဋ္ဌာနကြီးတခု ဖြစ်လာပါတယ်။
Social Security isasocial insurance program that is primarily funded through dedicated payroll taxes called Federal Insurance Contributions Act tax (FICA). လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ဒီဋ္ဌာနကြီးဟာ အမေရိကတခွင်လုံးက အလုပ်လုပ်တဲ့လူတိုင်း ( အစိုးရ / ပုဂ္ဂလိက ) ဆီက လစာထုတ်ပေးစဉ် FICA ဥပဒေအရ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်ရှင်ဆီက ရတဲ့ အခွန်ငွေတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရက Subsidise ( အရှုံးခံ ထောက်ပံ ) တာ ရှိမရှိတော့ ကျနော် သေချာ မသိပါ။ ဒီ Social Security ဌာနဟာ U.S မှာ အကြီးဆုံး လူမှုဘဝ အာမခံစနစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် အစိုးရ အသုံးစရိတ်ရဲ့ ၃၇% နဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး ( Gross Domestic Product: GDP ) စုစုပေါင်း ရဲ့ ၇% ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အောက်ပါစာရင်းက ဒီ Social Security Administration ရဲ့ နှစ်အလိုက် အသုံးစရိတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနှစ် - ခံစားသူဦးရေ - ဒေါ်လာ ..
( အဲဒီတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ Social Security benefits ခံစားသူ ဦးရေသန်း ( ၅၀ ) ကျော် ရှိပြီး၊ သုံးစွဲရငွေ ပေါင်းက ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၆ သိန်းကျော် ရှိခဲ့တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိန်းဂဏန်း တွေက ဒီကနေ http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_%28United_States%29 ကိုးကားထား တာပါ။ ) အခု Website တွေကို မကိုးကားတော့ဘဲ ကျနော့် လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံကိုပဲ အရပ်ပြော ပြောပြပါတော့မယ်။ )
ဒီနံပါတ်ကို ၁၂၃ - ၄၅ - ၆၇၈၉ ပုံစံနဲ့ရေးလေ့ရှိကြပြီး အမေရိကမှာ တရားဝင် နေထိုင်သူတို့ရဲ့ ဂဏန်း ( ၉ ) လုံးပါ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ( သို့မဟုတ် ) မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ဖြစ်ပါတယ်။ SSN card ရဖို့အတွက် Permanent Resident ဖြစ်ဖို့မလိုဘဲ US ကို legally ဝင်လာဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ကျောင်းတက်ရင်၊ အလုပ်လုပ်ရင်၊ Foodstamp ( ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ကျခံသော အစားအစာဝယ်ယူခွင့်ကဒ်ပြား) လျှောက်ချင်ရင်၊ medical insuarance လျှောက်ချင်ရင် ဒီ SSN နံပါတ် လိုအပ်ပါတယ်။ Mexicans တွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ခိုးဝင်သွားတတ်ကြသလို illegal migrants တွေအဖြစ်နဲ့ U.S ကို ဝင်ရောက်လာကြသူတွေ များလို့ သူတို့မှာ ဒီနံပါတ် မရှိတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ( တရားဝင်ရောက်လာ သူတို့ရတဲ့ ) Foodstamp ရခွင့်၊ ဆေးကုသခွင့်၊ တရားဝင် အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးကောင်း ဆုံးရှုံးနေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ဆက်စပ်တွေးကြည့်မိတာသာ ဖြစ်ပြီး သေချာမသိပါ။ သူတို့က စပိန်စကားပြောကြပြီး စပိန်ဘာသာစကားဟာ အမေရိကမှာဒုတိယရုံးသုံးဘာသာစကားတခုသဖွယ် အသုံးတွင် ကျယ်လှပါတယ်။ ၂၀၅၀ လောက်မှာ သူတို့ ဦးရေက အခု ဒုတိယအများဆုံး အမည်းလူဦးရေကို ကျော်ပြီး ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြာပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရုံးစာတွေကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးပေမဲ့ ဘတ်စ်ကား၊ ရထားတွေပေါ်မှာ “ယခုရောက်မဲ့ မှတ်တိုင်က ဘာမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတာမျိုး ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်စကား၊ စပိန်စကား ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ကြေညာပေးတာပါ။ ကုန်ပစ္စည်း ( ဥပမာ၊ ကွန်ပြူတာ၊ တီဗီ ) တခုရဲ့ manual ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်၊ စပိန် နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးပေးထားလို့ သူတို့အဖို့ အင်္ဂလိပ်စကား မတတ် လည်း အလုပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ အာရှသားတွေလောက် အင်္ဂလိပ်စကား မတတ်ကြပါဘူး။
SSN အကြောင်း ဆက်ရရင် SSN ဟာ လူတယောက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတယောက် အလုပ်မရှိလို့ unemployment benefit နဲ့ Foodstamp benefit ခံစားနေရာက အခန့်သင့်လို့အလုပ်ရသွားပြီဆိုရင် ဒီလူတယောက် အလုပ်ရသွားပြီမှန်းသူတို့သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခု အလုပ်ရနေပြီမို့ ခင်ဗျားရဲ့ foodstamp benefit ကို ရပ်စဲလိုက်ပါကြောင်း ဆိုပြီးတော့ စာရောက်လာပါတယ်။ ကျနော် တခါတုန်းက ကားမောင်းသင်မယ် ဆိုပြီးတော့ $ 1800 နဲ့ အနီရောင် Ford ကားတစီး ဝယ်ဖူးပါတယ်။ အမောင်းစသင်တဲ့နေ့မှာပဲ သစ်ပင်တပင် ဝင်တိုက်မိလို့ နည်းနည်းလန့်သွားပြီး အခုထိ ကားမောင်းသင်ဖို့ ထပ် မကြိုးစားမိတော့ပါဘူး။ အဲဒီကားကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ပြင်ပြီး ပြန်ရောင်းလိုက်ပါတယ်။ တခါသားမှာတော့ Credit Card ကုမ္ပဏီ တခုကလားမသိဘူး။ ကျနော့်ကို ဖုန်းပေါ်မှာ အင်တာဗျူတော့ “US မှာ property တခုခု ပိုင်ဆိုင်ဖူးသလား” လို့ မေးပါတယ်။ ကျနော်က “ဟင့်အင်း.. ဘာမှ မပိုင်ဖူးပါဘူး” လို့ ဖြေ လိုက်မိတော့ “ကားတစီး လောက်များ မပိုင်ဖူးဘူးလား.. အဲဒီကား အရောင်က ဘာလဲ” လို့ မေးလာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်က “ဩော်.. သတိရပြီ.. အနီရောင်ပါ” လို့ ဖြေလိုက်ရပါတယ်။ အခုထိလည်း ကျနော်က ကားပိုင်ရှင် စာရင်းပေါက်နေသေးတယ် ထင်တယ်။ တခါတရံ ကျနော့်ဆီကို “ခင်ဗျားလို ဘာပြသနာမှ မပေါ်တဲ့ ဒရိုင်ဘာကောင်း တယောက်ကို ကျုပ်တို့ ယုံတယ်” ဘာညာနဲ့ စာတွေ လာနေတတ်သေးတုန်းပါ။ ဟင်း..ဟင်း၊ ဒီမှာ သစ်ပင်ဝင်တိုက်ထားတာ သူတို့ မသိကြဘူး..း))
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ နံပါတ်ကို ခေတ်မီလှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာ ထုတ်ပေးထားပုံက တော်တော် ချာတူး လန်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံလည်း မပါဘဲ visiting card အရွယ်စက္ကူပေါ်မှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ရိုက်ပေး ထားတာလောက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက္ကူက visiting card လိုထူထူထဲထဲ၊ လှတပတကတ်ထူစက္ကူ မဟုတ်ပါဘူး။ အရည်အသွေးခပ်ညံ့ညံ့ ရိုးရိုး စက္ကူပါး လေးပါ။ ပြည်နယ်က ထုတ်ပေးတဲ့ ID အကြောင်း ပိုစ့် ( ၂ ) မှာ ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒီ State ID တွေကမှ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံ အသားကပ်နဲ့ Bank ATM card တွေလို ပလပ်စတစ်ကဒ် တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ State ID က ကိုယ့် ဓါတ်ပုံ ပါတာကြောင့် photo ID လို့ခေါ်ပြီး မိမိသည် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း အကောင်းဆုံး အထောက်အထား ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် ကုလားကားလို ပေရှည်နေတာနဲ့ အဓိက ပြောချင်တဲ့အပိုင်းက အခုမှ ရောက်တော့တယ်။ ကျနော်ကတော့ "မသန်စွမ်းသူ တယောက် ဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခုတည်းနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု U.S. Treasury general funds ( ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရံပုံငွေ ) ထဲက အခု ၂၀၁၂ နောက်ဆုံးနှုံးထားအရ Supplemental Security Income ( SSI လို့ ခေါ်တယ် ) တလ $ 698 ရရှိပါတယ်။ ( ဒါက အိမ်ငှားခနဲ့ အဝတ်အစားဖိုး၊ အင်တာနက်ခ၊ ဖုန်းခ စတဲ့ အသုံးစရိတ်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ အစားအသောက် အတွက်ကို တော့ မိမိနေထိုင်ရာပြည်နယ် အစိုးရက Foodstamp benefit card ကလေး တခု ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် အိမ်လခ၊ လူဦးရေနဲ့ ဝင်ငွေတွေမတူလို့ ဟိုလူနဲ့ဒီလူ ရတာချင်း သိပ်မတူပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ $ 182/ month ရပါတယ်။ ဒီငွေက နေ့တိုင်းအသားစားနိုင်လောက်အောင် လုံလုံလောက်လောက် ရှိပါ တယ်။ ဒီတော့ ကျနော် တလမှာ စုစုပေါင်း $ 698 + $ 182 = $ 880 ရတဲ့သဘောပါ။ ) ဒီ SSI အစီအစဉ်ကိုတော့ ၁၉၇၄ မှာ စတင်ခဲ့တာပါတဲ့။ ဒီငွေကို အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Social Security fund ထဲက ပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့က လူအားစိုက်ပြီး ကျနော်တို့ ဘဏ်စာရင်းထဲကို လစဉ် လဆန်း( ၁ ) ရက်နေ့မနက်မှာ အဲဒီငွေရောက်နေအောင် လုပ်ပေးကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်နေတုန်း မစွမ်းမသန် ဖြစ်တဲ့ လူတွေကတော့ Social Security Disability Benefits ခေါင်းစဉ်နဲ့ အဲဒီ Social Security Trust Fund တွေထဲက ရကြတာပါ။ သူတို့က မစွမ်းမသန်ပင်စင်သဘောမို့ ပင်စင်က ကျနော်တို့ထက် များကြမယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျနော်တို့ SSI စားတဲ့ အုပ်စုကတော့ အရင်က ပုဂ္ဂလိကအလုပ်ကော၊ အစိုးရအလုပ်ကော လုပ်ချင်မှလုပ်ခဲ့ဖူးမှာ ဖြစ်တဲ့ လပ်လျား လပ်လျားအုပ်စုပါ။ ပြောချင်တာက SSI အုပ်စုဟာ The group of needy people ဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖူးသလား ဆိုတဲ့ basis အပေါ် မှာ အခြေမခံပါဘူး။ ငါတို့ မကယ်ရင် သေဖွယ် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ humanitarian basis နဲ့သာ ထောက်ပံ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံ သား မဟုတ်တဲ့သူကို ( ၇ ) ထိပဲ ထောက်ပံ့ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ကျနော် ဒီမှာ ၅ နှစ်ကျော်လို့လည်း နိုင်ငံသား မလျှောက်၊ မလျှောက်လို့ Citizen မဖြစ်လာသေးရင် ( ၇ ) နှစ်ကျော်ရင် လစဉ်ထောက်ပံ့နေတာကို ရပ်စဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အုပ်စု မှာ မသန်စွမ်းသူများ၊ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်ပြီးသူများ ( သူတို့ သက်ကြီးဝါကြီး ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပဲ စဉ်းစားပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတာ၊ မလုပ်ခဲ့ဖူးတာကို ထည့် မစဉ်းစားပါ။ )၊ မျက်စိအာရုံကွယ်သူများ၊ ၁၈ နှစ်အောက် အလုပ် မလုပ် နိုင်သေးမီ အကူအညီ လိုအပ်သူများ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီလို SSI benefits ခံစား နေကြတဲ့ လူဦးရေဟာ (၈) သန်းကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့အစိုးရက ဒီလောက် ကောင်းနေပါလျှက် နဲ့တောင် ဘာလို့များ US မှာ homeless, beggars တွေကိုလည်း တွေ့နေရသေးတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျနော် မရှင်းပြတတ်တော့ပါဘူး။ ဒီလူတွေက ဆေးတွေဘာတွေချပြီး SSN နဲ့ ခြေရာခံလို့ရတဲ့ အလုပ်ရာဇဝင်၊ credit ရာဇဝင် လုံးဝမကောင်းတော့တဲ့ ပြသနာ လို့ထင်မိပါတယ်။
Age 65 or older - 2,051,848 persons
Between ages 18 – 64 - 4,691,651 persons
Under age 18 - 1,258,533 persons
Total Beneficiaries: 8,002,032 persons
1974 -3,996,064 - $5,096,813,000
နိဂုံးချုပ် ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာလောက်မဟုတ်တောင် အနည်းဆုံး တောင်းရမ်း စားသောက်နေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ မစွမ်းမသန်တွေ ( အစိုးရ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ဖူးဖို့ မလို ) ၊ လူမယ်ကလေးတွေကို ဆန်ရေ စပါးပေါလျှံကြွယ်ဝတဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ထမင်းတလုတ်စားရဖို့အရေး သိပ်မခက်ခဲရ အောင် တာဝန်ရှိ သူတွေက စောင့်ရှောက်ကြစေချင်တာပါ။ ကောင်းတာ၊ သက်တောင့်သက်သာ ရှိတာ၊ နိုင်ငံသားတွေ ကို ထွေးပိုက်ကြင်နာ၊ လူလို သူလို ဆက်ဆံတာတွေ ကိုတော့ဖြင့် သူများဆီ မှာ တွေ့ လည်း ယူသင့်တာပဲ မဟုတ်ပါလား.. ။
Posted by pyaykaungaung at 4:04 AM No comments:
ရွှေရောင်လူ * တို့၏ အံ့ဖွယ်ဘနန်း Citizen Journalism
(ရွှေရောင်လူ* ။ ။ ဖဘမိတ်ဆွေ Ain Chann Myay ( မလေး ) ၏ကိုယ်ပိုင်စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကား လုံးကို ကြိုက်နှစ်သက် လှသဖြင့် ( သူမအားအသိမပေးရသေးဘဲ ) သူမ၏ post တခုမှ ခိုးယူသုံးစွဲထားပါသည်။ ယခုမလေးကို tag ရင်း တလက်စတည်း အဲသည် စကားလုံးကို သုံးစွဲခွင့်ပြုပါဟု လေးစားစွာ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါ သည်။ Citizen Journalism အကြောင်းကို အတည်ပေါက် ရေးထားတာမဟုတ်ပါ။ ကျနော် တခါမျှမရေးဖူးသည့် satire တပုဒ် ရင်ထဲသို့တိုးဝင်လာသည့်အခိုက် ဖမ်းဆုပ်ထား လိုက်ပြီး ပြန်ချရေးကြည့်မိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။း)
ရွှေရောင်လူ “ဦးက” ကား တခါတရံ အသောက်အစား ဖက်တတ်သော ခေတ်ဆွေး လူပျိုကြီး ဖြစ်လေ သည်။ မှန်ရာကို ဝန်ခံရသော် သူသည် လူပျိုကြီးတို့ထုံးစံအတိုင်း အလွန်ချမ်းမြေ့သာယာ ရှိမည်ဟု ထင်ရသော kind-hearted, sweet and intelligent ဖြစ်လှစွာသော ချစ်လှစွာသောဇနီးနှင့် cute, clever and intelligent ဖြစ်လှစွာသော ချစ်စရာ့သားသမီး ၂-၃ ယောက်လောက်ဖြင့် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်၊ ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ရှိမည့် မိသားစုဘဝတခုကို လွန်စွာမှပင် လိုချင်တောင့်တ ပိုင်ဆိုင်ချင်လှ၏။ တကယ့်အပြင်လောက က မိသားစုဘဝတခုသည် သူ့စိတ်ကူးထဲက မိသားစုဘဝလောက် heaven-like, unique မဖြစ်မည်ကို သူသိပါ သည်။ သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဤသို့ heaven-like, unique မဟုတ်ကောင်း မဟုတ်နိုင်သော မိသားစုတခုကိုပင် သူလိုချင်၊ ပိုင်ချင်သည်မှာ သူ့အသက်တနှစ် ကြီးလာလေ ( လူ့ဘဝမှာ နေရဖို့သက်တမ်း တနှစ်လျော့လာ လေဖြစ်သဖြင့် ) ပိုမိုဆိုးရွားပြင်းထန်လာလေ၊ ပို၍ဒီဂရီတိုးလာလေ ဖြစ်နေလေသည်။ အသက် တရိပ်ရိပ်ကြီး လာနေသည်ကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်စွာဖြင့် မိန်းမလိုချင်သောရောဂါ ပိုတိုး၊ ပြင်းထန်၊ ကြီးထွားလာနေသည်ကို သူရှက်တက်တက်ဖြစ်မိသော်လည်း ဒါက “သူ့အလွန်မဟုတ်၊ အခြားယောက်ျားတို့လည်း မိန်းမတယောက်၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါဝင်ကူညီမှုကို သူတို့ဘဝတွင် လိုအပ်ကြမြဲ၊ လိုချင်ကြမြဲသာ ဖြစ်သည်။ ယခု သူလည်း ထိုအရာကို လူသားဆန်စွာ လိုချင် ခြင်းမျှတည်း။ စင်စစ်ကား ဤအချင်းအရာသည် မိန်းမထု၏ “မာတုဂါမ” ( မာတု=မိခင် + ဂါမ= မျိုးနွယ်) ဖြစ်မှုကို ချီးမြှောက်ပူဇော်ခြင်းသာလျှင်တည်း” ဟု မိန်းမထုအပေါ် သူတကယ် ထားရှိအပ်သော စေတနာ၊ မေတ္တာ ဗရပွဖြင့် သူဆင်ခြေပေးလေ့ ရှိလေသည်။
ထို့ပြင် ဘယ်တုန်းက သူ့ခေါင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်မသိသော သူ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် တရပ် ( ဘယ်ပညာရှိကမှ အဲသည်လိုပြောသည်လို့မကြားစဖူးသဖြင့် ) မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ “ယောက်ျားတို့ သည် မိန်းမထုကို ကိုယ့်ယောက်ျားထုကိုထက် ပို၍ကြင်နာ၊ ပို၍သက်ညှာ၊ ပို၍စေတနာ မေတ္တာပွား၊ ပို၍တန်ဖိုးထားရန် တာဝန်ရှိ သည်။ ယင်းတာဝန်သည် သဘာဝတရား၏အလိုတော် ( An arrangement of the Nature or the Universe ) အတိုင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မိန်းမထုသည်လည်း ယောက်ျားထုကို မိမိတို့မိန်းမထုထက် ပို၍ ကြင်နာ၊ ပို၍ သက်ညှာ၊ ပို၍စေတနာ မေတ္တာပွား၊ ပို၍တန်ဖိုးထားရန် ဝတ္တရားရှိသည်။ သို့မှသာ ဤစကြာဝဠာ၊ ဤကမ္ဘာ၊ ဤလူသားမျိုးနွယ်သည် မပျောက်မသုဉ်းဘဲ ဆက်လက်စည်ပင်၊ တိုးတက်နေပေမည်” ဟူ၏။ ( ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်သော လောကီကိုပယ်ရှောင်၍ တရားရိပ်သာစခန်းဝင်လျှက် နိဗ္ဗာန်ကို အမြန်ဆုံးမျက်မှောက် ပြုလိုကြသူများကား သူ့အယူကို ရှုတ်ချကြဖွယ် ရှိသည်။ သူ့ case တခုတည်းအတွက် ကွက်၍ပြောရသော် သူကား ( သည်လောက် လိုချင်လောဘများနေမှတော့ ) မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ရက်တိုတိုနှင့်ရောက်လွယ်၊ ရလွယ်မည် မဟုတ်၊ နိဗ္ဗာန်စခန်းအတွက် သူဤဘဝမှာတော့ eligible မဖြစ်သေးသည်ကိုကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ကောင်းစွာ သိသဖြင့် နိဗ္ဗာန်သို့ အမြန်ရောက်ရေးကိစ္စကို လက်လျှော့ထားလိုက်ကာ သဘာဝတရား၏ အလိုတော်အတိုင်း အလိုက်သင့်၊ အလျားသင့် နေထိုင်သွားရန် သာ စိတ်ကိုဖြေလျှော့ထားသူ ဖြစ်လေသည်။ သူ့အမြင်မှာ သဘာဝ တရားက အံ့ချီးဖွယ် unique ဖြစ်လှသဖြင့် သဘာဝတရား အတိုင်း နေထိုင်တာ သိပ်အဆိုးကြီး ဆိုးမည့်ပုံမရှိ ဟု အယူရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဇီးစေ့လောက် ဦးနှောက်နှင့် အကြောင်းခြင်းရာတခုသည် “သဘာဝတရား ( Nature: In his opinion, touchable traits of either God or Law of Karma ) နှင့်ကိုက်ညီလျှင်မှန်သည်” ဟုယူဆထားရာ သူ မိန်းမမရဖူးသဖြင့်၊ သားသမီးမရှိဖူးသဖြင့် ထိုအရာတို့ကို သူ ( နွားလိုမဟုတ်ဘဲ လူလို) လိုချင် တောင့်တမိခြင်းသည် အပြစ် ( sin ) မဟုတ်ဟု ယူဆလေသည်။ ( နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းတွင်ကား ထို အရာတို့သည် ခလုတ်ကန်သင်း ဖြစ်နိုင်သည်ကို သူ သဘောတူပါသည်။ သို့ရာတွင် သူကား နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ လောလောဆယ် အစီအစဉ် မရှိသေးပါ။ သဘာဝတရားက sponsor လုပ်ပြီး ပို့ပေးတော့မှပဲ သွားတော့မည်ဟု စိတ်ကူးထားလေသည်။ သဘာဝတရားက ကျုပ်ကို ဒီလောက ထဲ ခေါ်ယူလာခဲ့တာပဲ။ သူပဲ အဆုံးတနေ့မှာ သင့်တော်ရာနေရာ တခုကို ပြန်ပို့ရမှာပေါ့ ဟု အရွဲ့တိုက်ပြီး လောကထဲမှာ နေနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ လူပျိုကြီးပေ ..သူ့အဖို့ ယောက်ျား ( မောင်/ အကို ) က မိန်းမ ( သူ့နှမ/ အစ်မ) ကို မြတ်နိုးချစ်ခင်ခြင်းသည် ရိုးရိုးပင်ဖြစ်စေ၊ ဆန်းဆန်းပင်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်ရှုထောင့်က ကြည့်ကြည့် မမှားပေ..း))
သို့ရာတွင် သူကသာ မိန်းမထုကို ထိုကဲ့သို့ ညွတ်နူးကြည်ညိုစွာ မေတ္တာတွေ၊ တန်ဖိုးတွေ စွတ် ထားနေ သော်လည်း သူ၏ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလက္ခဏာသည် မိန်းမတယောက် စိတ်လုံခြုံမှုရနိုင်လောက်အောင် တင့်တယ် ခြင်း၊ မတင့်တယ်ခြင်း ( နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းခြင်း၊မကောင်းခြင်း ) ၊ သူ့ကို အရာခပ်သိမ်း အားကိုးနိုင်လောက်ဖွယ် ရှိခြင်း၊မရှိခြင်း၊ သူ့မျက်နှာမြင်၊ သူ့အသံကြား ချစ်ခင်ပါစေဆိုသော ဆုတောင်းနှင့် သူ ပြည့်စုံခြင်း၊မပြည့်စုံခြင်း၊ သဲကိုးဖျာပမာဏမျှလောက်ရှိသည်ဟု ဆိုကြကုန်သော အထူးထူး အပြားပြားသော ယောက်ျားမာယာတို့ကို ဖော်ပြရာ အိန္ဒြိယတိုင်းဖြစ် “ယောက်ျားမာယာ” ကျမ်း ( နှင့် Men are from Mars and Women are from Venus ကဲ့သို့သော သိုးဆောင်းကျမ်း ) တို့တွင် “မှန်ဖို့မလို၊ မိန်းမတို့၏ စိတ်နှလုံးကို သက်တောင့်သက်သာ ရွှင်မြူးနေစေဖို့သာ လိုသည်” ဟူ၍ ကျမ်းလာ ရှိသည်နှင့်အညီ ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ သူမတို့ကို “သူငယ်နှပ်စား” အမှတ်နှင့် စိတ်ရွှင်မြူးစေမည် ထင်ရာကို ပြောတတ်ခြင်း၊ မပြောတတ်ခြင်းစသော Outcome-deciding factors များ တစုံတရာ မှားယွင်း ချွတ်ချော်နေ ( something wrong ) လေသောကြောင့် သူသည် အသက် ၄၅ နှစ် သာ ကျော်လာသည်။ သူ့ဇနီးလောင်းကား ဘယ်ဆီနေမှန်းပင် မသိရသေးပေ။ ထိုမျှမက “အချစ်စစ် ဆိုသည်မှာ တဂျီဂျီ တောင်းလို့ ရလိုက်သည့်အရာမဟုတ်။ လူတယောက်၏ ရင်ထဲမှာ အလိုအလျောက် ဖြစ်တည် လာသော သူတပါးကို ယုံကြည်၊ စိတ်ချ၊ ရင်းနှီး၊ အားကိုး၊ အလေးထားလိုမှုသာ ဖြစ်လေသည်” ဟူ၍ အချစ်ကို ကိုးသုံးလုံး ( ၉၉.၉% ) ရွှေလောက် အစစ်အတိုင်း ထားချင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကြီးကား သူ့တသက်လုံးပင် အချစ်ရေးကံခေလိုက်ပုံမှာ သူတကယ်ချစ်ခင်၊ စွဲလန်း၊ မြတ်နိုးသွားခဲ့ မိသော မိန်းမတွေက သူမတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဤလူပျိုကြီးမှာ ဆွတ်ဆွတ်ပျံ့ပျံ့ romantic emotions မျိုးတွေ ရှိနေပုံ ရသည်ဟု ရိပ်မိရုံနှင့်ပင် သူ့ကို ( သူက ဘာမှတောင် မလုပ်ရသေးမီ ) သေခန်းတွေ ဘာတွေ ဖြတ်သွား တတ်ကြလေသည်။း))
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကြီးသည် လူကသာ အသက်ကြီးနေသော်လည်း သူ့ “နှလုံးသား ( ဝါ ) ခံစားမှု” ကား အသက်နှင့်အတူ လိုက်ပါကြီးပြင်း၊ ရင့်ကျက်မလာဘဲ ရံခါ ၁၈-နှစ်သားကောင်လေးတယောက်လို သူငယ် နှပ်စားခံစားမှုမျိုး ( နင့်နင့် နဲနဲ ခံစားနေတတ်သေးတုန်း ) ပဲ ရှိသေးလေသည်။ ဒါကလည်း လူပျိုကြီးတိုင်းမှာ အနည်းနှင့်အများဆိုသလို ရှိနေ တတ်သော “ လူပျိုကြီး syndrome” တရပ်ပင် ဖြစ်ပုံရ သည်။ ( လူပျိုကြီးများ သည် နှလုံးသားရေးရာမှာ properly matured မဖြစ်ဘဲ comparatively childish ဖြစ်ကြ သူ များသည်ဟု သူ ထင်ပါသည်။ အပျိုကြီးတွေ ကတော့ ဘယ့်နှယ်ရှိကြသည်မသိပါး) သူကထိုခံစားချက် မျိုးကို မရင့်ကျက်မှန်း သိသော်လည်း ပို၍လူသားဆန်၊ genuine ဖြစ်သည်ဟုထင်သဖြင့် an intelligence-guided emotion တခု ထက် an authentic solid emotion as it is. တခုကို ပို၍ ထွေးပွေ့ အပ်သည်ဟု အယူရှိလေသည်။ ( စကား ချပ်။ ။ သူ့ “ဦးနှောက် ( ဝါ ) အသိဥာဏ်” ကတော့ အသက်နှင့်အတူ လိုက်ပါကြီးပြင်းလာသည်ဟု သူထင်ပါ သည် ) ဤသို့ဖြင့် သူအတည်ပေါက် ဆွတ်ပျံ့မိသည့် ရွှေရောင်လူလုံမေပျိုတို့က သူ့ကိုသေခန်းတွေဘာတွေ ဖြတ်ကုန်ကြသောအခါ သူက ခံစား သင့်တာထက် ပိုပိုသာသာခံစားမိ ( dramatized ဖြစ် ) ကာ အသည်းကွဲ တိုးရစ်ကြီးဂိုက်မျိုးနှင့် အသောက် အစား ဖက်မိတတ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သူ၏အကျင့်ဆိုးတခုမှာ အရက်သေ စာ သောက်စားမိလျှင် ထမင်းမစားလိုခြင်းနှင့် ထိုအသောက်အစား ဝဲဩဂထဲမှ အနည်းဆုံး (၂) ပါတ်လောက် ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်နေတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ( အသောက်ဖက်နေစဉ် ထမင်းလို solid food တွေကိုမစားချင် သဖြင့် နွားနို့၊ ကြက်ဥအစိမ်း၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းတို့ဖြင့် အသက်ဆက်ထားရသည်။ ထို့ကြောင့် ၂- ၃ ပါတ်ထက် ပိုသောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယင်းထက်ပိုပြီး ဆက်သောက်နေလျှင်လည်း အဟာရ ပြတ်ပြီးသေဖွယ်ရာသာရှိပါသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ သူ ( တခါတရံ ကြိုကြား၊ ကြိုကြား သေချင်စိတ်ပေါက်မိ သော်ငြား ) တကယ်မသေချင်သေးပါ။ သူ့ intuitive sensitivity က သူ လောကထံမှ လက်ဆောင်ခပ်ကြီးကြီး တခုရဦးမည်၊ ရရန်ကျန်နေသေးသည်လို့ပဲ ထင် နေပါသည်။ သူက Justice of Universe ကိုယုံကြည်ပါသည်။ သူတသက်လုံး Humanity ကို၊ Fairness ကို၊ Justice ကို၊ လောကကိုချစ်လာခဲ့သမျှ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးသားခဲ့သမျှသည် အချည်းနှီးမဖြစ်တန်ရာ၊ Justice has not been done to him yet; so it should be done sooner or later during this lifetime. ဟု သူထင်မိလေသည်။ သူ မသေချင်အောင်လို့ပဲ အဲလိုစိတ်ကလေး ( မျှော်လင့်ချက် ) တခုကိုသူ့ဖာသာ ဖန်ဆင်း ထားမိသလား မပြောတတ်ပါ။ ထို့ပြင် သူကား ဟောချက်အကောင်းဆိုလျှင် လက္ခဏာတို့ ဘာတို့ကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ ( ဟောချက်မကောင်းလျှင်ကား “ဟုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်” ဟုဆိုကာ မယုံကြည်ပါး) သူ့လက်ဖဝါးပြင်မှ တထောင် မှာတယောက်ရှိခဲသည့် အလွန်သန့်ရှင်းသောစိန်ဖူးကြီး ( Diamond ) ကို နှလုံးလမ်းကြောင်းနှင့် “ကမ္မလေခ” တို့က ပေါင်း၍ ထမ်းထားကြသည်မှာလည်း အချည်းနှီးမဖြစ်တန်ရာဟုလည်း ထင်နေလျှက် ရှိလေသည်း)
သူသည် ထိုသို့ အရက်ကိုမုန်းလောက်အောင် ၂-၃ ပါတ်ခန့်သောက်ပြီးနောက် တိကနဲဖြတ်လေ့ ရှိပါသည်။ ထိုသို့ တိကနဲဖြတ်သောအခါ alcohol-withdrawal syndrome ကိုခံစားရကာ ၄-၅ ညလောက်တမှေးမှ အိပ်လို့မရတတ်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ စိတ်ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်၍၊ အားယုတ်၍ ဆေးရုံတွေဘာတွေလည်းတက်ရ တတ်ပါသည်။ ထမင်းလည်း အတင်းစားနေရစေကာမူ စားချင်စိတ်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အရက်မကောင်းကြောင်း ကို အရက်မသောက်တတ်သူတွေထက် အရက်သောက်တတ်သူတွေက ပိုသိသည်ဟု လူပျိုကြီးဦးက က ပြော လေ့ရှိပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားစဉ် နာကျင်မှုကို မိန်းမတွေကသာ သိမည်ဖြစ်ပြီး ယောက်ျားတွေက မသိနိုင် သကဲ့သို့တည်း ဟူ၏။ ထိုသို့ အရက်မကောင်းကြောင်း သိပါလျှက်နှင့်လည်း သောက်ဖြစ်သည်မှာ တခါတရံ သူ၏ လတ်တလော ရင်ထဲကဒုက္ခ၏ထုထည်က အရက်သောက်သုံးသဖြင့် နောင်ခံစားရမည့် ဒုက္ခ၏ထုထည် ထက် ပို၍ကြီး ( Present Duhka > Future Duhka ) နေတတ်သောကြောင့်ဟု သူကဆိုလေသည်။
သူက ယင်းသို့ အရက်သေစာ သောက်စားထားလျှင် မည်သူတယောက်နှင့်မှ စကားဟဟ မပြောတော့ဘဲ၊ မည်သူ့အိမ်ကိုမျှလည်း သွားမလည်ပတ်ပါဘဲ၊ မည်သူ့ကိုမျှ သွားမရစ်ပါဘဲ သူ၏ “ဝေဒနက္ခန္ဓာ” ကို ရှုမှတ် ပွားများ၍သာ နေတတ်ပါသည်။ ဤသို့ပင် ဖြစ်လျှက်နှင့်လည်း၊ “လူပျိုကြီး ဦးက” ယခုတလော ထမင်းပုံမှန် မစားတော့ကြောင်း၊ တက္ကစီဖြင့်အိမ်ပြန်လာကြိမ် များနေကြောင်း၊ အဝတ်အစား ဘိုသီဘတ်သီနှင့် မျက်နှာက လည်း ညှင်းသိုးသိုး ဖြစ်လာကြောင်း၊ ဤအချက်အလက်များ ကို ထောက်ရှု၍ ဤလူ အပြင်မှာ အရက်သေစာ သောက်သုံး နေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း စသော update news များသည် ထိုးထွင်းဥာဏ်ကို အသုံးပြုရသော investigative journalism ပညာစွမ်းဖြင့် Myanmar Community Wikileak ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားတတ်ပြီး လျှင်၊ ထိုထင်မြင်ချက်များသည်ပင် ယုံကြည်ရသောသတင်း အဖြစ်ဖြင့် ( ရွှေရောင်လူတို့၏ မွေးရာပါ တပိုင် တနိုင် သတင်းလက်ဆင့်ကမ်း citizen journalism အတတ်ပညာဖြင့် ) နေရာဒေသအသီးသီးသို့ ပျံနှံ့ရောက်ရှိ သွားတတ်လေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Oregan ပြည်နယ်တွင် ဦးက ဘီယာအလွန် အကျွံ သောက် သုံးနေကြောင်းကို မိုင်ထောင်ချီဝေးမည့် Texas ပြည်နယ်မှ၎င်း၊ မိုင်သုံးထောင်လောက် ဝေးသည့် Maryland ပြည်နယ်မှ၎င်း၊ ရံခါ globalization နည်းဖြင့် အခြားကမ္ဘာဖက်ခြမ်းမှာရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံမှ၎င်း အံ့ဖွယ်ဘနန်း သိရှိနေတတ်ကြလေသည်။ ( သူအရက်သောက်ဖြစ်တိုင်း တော်တော်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ နေသော သူ့သူငယ်ချင်း ၏အဖေက “ကို ….၊ အရက် ပြန်သောက်နေတယ်ဆို ..” ဟု ဖုန်းဖြင့် လှမ်းမေးတတ်လေ့ ရှိသဖြင့်၎င်း၊ တခါတရံ Texas မှ၊ တခါတရံ ထိုင်းနိုင်ငံမှပင် အလားတူ မေးတတ်လေ့ရှိကြသဖြင့်၎င်း မိမိ၏ ထင်ပေါ်ကျော်ဇောမှုကို သူ သိရခြင်းဖြစ်လေသည်း) ထိုအခါ လူပျိုကြီး ဦးက က “ဩော်.. ငါ့နှယ်.. celebrity ကျနေတော့တာ ပါကလား” ဟု ရွဲ့ပြီးတွေးကာ ဆရာကြီး အီကြာကွေး၏ ငါးခူပြုံးလေး ပြုံးမိလေသည်။
တနေ့သနှိုက် လူပျိုကြီးဦးကသည် သူ့ဇာတိပြည်နယ်သား လူငယ်လင်မယားက လာလည်စေချင်သည် ဆို၍ ထိုသူတို့၏ နေအိမ်သို့ သွားလည်မိ၏။ သူတို့ကား လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းနှင့်2bedrooms apartment တခုကို ငှားထားကြရ၍ လူပျိုကြီး ဦးကကို သူတို့နှင့်အတူ နေစေချင်ကြလေသည်။ ဦးက ကလည်း လောလောဆယ် နေထိုင်လျှက်ရှိသော နေအိမ်က Myanmar Wikileak နှင့် အဆက်အသွယ် မကင်းပုံရသဖြင့်၎င်း၊ အခြားဖော်ပြခြင်းငှာမသင့်သော အကြောင်းများကြောင့်၎င်း လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ ပြေး ချင်နေခိုက် ဖြစ်သဖြင့် သည်လကုန်လျှင် နေမည်ဟု ပြောခဲ့လေသည်။ ထိုလူငယ်လင်မယားက ဦးကကို ထမင်းကျွေးမွေးပြီး၊ လာနေ မည်ကို ဝမ်းသာနေကြပုံဖြင့် ရွှင်ရွှင်ပျပျ ရှိကြ၏။ သည်လိုနှင့် ဦးက က အိမ်ရှင်ဟောင်းကို ကြိုကြိုတင်တင် ပြောထားရန် ဝတ္တရားရှိသည့်အလျောက် ဤလကုန်တွင် နေရာသစ်သို့ ပြောင်းမည်ဟု ပြောလိုက်၏။ ဦးက က ထိုသို့ပြောသည်ကို အိမ်ရှင်ယောက်ျား အိမ်ထောင်ဦးစီးကတော့ “အင်း.. ကောင်းပါတယ် .. ကျနော်တို့လည်း တခြားပြည်နယ် ပြောင်းဖြစ် ချင် ပြောင်းဖြစ်မှာနဲ့ အတော်ပါပဲ..” ဟု ဆိုလေသည်။ သို့ရာတွင် အိမ်ရှင်မကား ကျွန်ုပ်တို့၏ လူပျိုကြီး ဦးကကို မခေါ်မပြောတော့ဘဲ ဂရုမစိုက်သော အမူအရာကိုလည်း ပြသလာလေသည်။ ( ဥပမာ၊ သူမ၏ယောက်ျား အလုပ်သွားနေချိန် မနက်ပိုင်းတွင် မနက်စာထမင်းမချက်တော့ဘဲ ညနေ ၄ နာရီ လောက် တွင်မှ ညနေစာအဖြစ် ပေါင်းချက်လာခြင်းမျိုး ပေတည်း..း)
ဤသို့နှင့် ဦးကသည် နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရခါနီး ရက်သတ္တတပါတ်လောက်အတွင်း ချိုသည်၊ ခါးသည် ဘာမှမပြောဘဲလကုန်ခါနီးတွင် နေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့လေသည်။ နေရာသစ်သို့ ရောက်သည်နှင့် ပင် ရွှေရောင်လူတို့၏ citizen journalism အစွမ်းကို တွေ့ရလေတော့၏။ ဦးက သည် အရက်သောက် တတ်ကြောင်းသတင်းက(လူထက်အရင်ဦးစွာ) နေရာသစ်သို့ ရောက်နှင့် နေလေသည်။ နေရာသစ်က အိမ်ရှင်မက ပြောပြရာတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂-ရက်ခန့်က “အန်တီကြီး” ဟု သူတို့ကခေါ်ကြလေ့ရှိသော အသက် ၆၀ ကျော် ရွှေရောင်လူ အမျိုးသမီးကြီး တယောက်နှင့် ဦးက ယခင်ကနေသည့်အိမ်ခန်းမှ အိမ်ရှင်မ တို့သည် ဤအိမ်ရှင်သစ်ထံသို့ရောက်လာကြပြီး ဦးက အရက်သောက်ကြမ်းပုံကို စီကာ ပတ်ကုံး ပြော ပြကြသောဟူ၏။ အန်တီကြီးက အိမ်ရှင်သစ် ( အိမ်ရှင်မ ) ကို “နင်တို့ ငွေမျက်နှာချည်း မကြည့်ကြနဲ့။ ဒီလိုလူမျိုး နဲ့ ရေရှည် လက်တွဲလို့ ဖြစ်ပါ့ မလား ဆိုတာလည်း ထည့်တွက်။ ငါက နင်တို့ကို စေတနာနဲ့ လာသတိပေးနေတာ” ဟု ပြောသည်ဆို၏။
သို့ဆိုလျှင် အန်တီကြီးသည် ဦးက၏အိမ်ရှင်ဟောင်း အပေါ်တွင်ကား စေတနာရှိဟန်မတူပေ။ အကြောင်း မှာ သည်လောက် သောက်စားမူးယစ်တတ်သော လူပျိုကြီးဦးက တယောက် အဝေးသို့ သူ့သဘော သူဆောင် ကာ ထွက်သွားမည့်အရေးသည် အိမ်ရှင်ဟောင်းအဖို့ “ကောင်းလှောင့်တေး၊ ကောင်းလှောင့်တေး .. ဟုကြူးရင့်လျှက် ဝလကလ - ဝေးလေကောင်းလေစွတကား”ဟု ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ လက်ခမောင်းခတ် သင့်သောကိစ္စ မဟုတ်တုံလော့။ ယခု ထိုအခွင့်အရေး ပေါ်ပေါက်လာပါလျှက် အိမ်ရှင်ဟောင်းတို့ ဤ ယစ်ထုတ်လူပျိုကြီးနှင့် ဆက်လက် အတူနေရစေရန် သူမမို့ ပြုအားရက်ပေသည်။
ဇာတ်ပေါင်းသော် ဦးကသည် နေရာသစ်သို့ရောက်ရောက်ချင်းပင် “အရက်သေစာ မသောက်သုံးပါ ( သူရာ မေရယ မဇ္ဇပမာဓဋ္ဌာနာ ဝေရာမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ )” ဟူ၍ အာမဘန္တေ ခံလိုက်ရလေ၏။ တကယ် တော့ လူပျိုကြီး ဦးကသည် အရက်သောက်ရလောက်ဖွယ် အကြောင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်မှ အရက်ကိုတောင့်တ တတ် သူဖြစ်၍ သာမန်အချိန်များတွင် အရက်မသောက်ရတာက သူ့အတွက် ဘာမှကိစ္စမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ထက် ငယ်ရွယ်သူတွေထံမှာ “အရက်မသောက်တော့ပါ” ဟု ပြောလိုက် ရတာကတော့ သူ့အတွက် နည်းနည်းကိစ္စရှိ ပါသည်။ သူက မိမိအရက်သောက် တတ်ကြောင်းကို ကြုံကြိုက် သည့်အခါ အိမ်ရှင်သစ်အား မိမိဖာသာပြောပြရန် စိတ်ကူးရှိပါသည်။ ခုတော့ သူများတွေက ကိုယ့်အကြောင်း လာပြောသွားတာကို ခံရသဖြင့် စိတ်ထဲ ဇလုံးဇခု ရှိလှသည်။ ထို့ကြောင့် သည်တခါတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကြီး ( လူပျိုကြီးဦးက ) သည် ငါးခူပြုံးကလေး မပြုံးနိုင်ရှာတော့ဘဲ၊ ရွှေရောင်လူတို့၏ တပိုင်တနိုင် သူတပါးမကောင်းသတင်း ဖြန့်ဖြူးလိုသည့် (Citizen Journalism ) အမျိုးသားရေး စရိုက်လက္ခဏာ ကို သိကြားမင်း သံပုရာသီးစားထားသည့် သိပ်မကြည်သောမျက်နှာ ဖြင့် စိတ်ထဲကပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်၊ အားရပါးရ ဆဲမိသောဟူ၏..း))
Labels: article satire